Taliyihii Ciidanka Koofiyad-casta Ceerigaabo oo La dhaawacay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Taliyihii Ciidanka Koofiyad-casta Ceerigaabo oo La dhaawacay
Taliyihii Ciidanka koofiyad-casta ee magaalada Ceerigaabo Siciid Cabdi Warsame ayaa goor dhoweyd oo caawa ah waxa rasaas la beegsaday mid ka mid ah askartiisa uu xukumayey.
Taliyaha ayaa sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka qaarkood waxa rasaastu ka haleeshay labada gacmood islamarkaasna xaaladdiisu culus tahay waxana lagu jiraa qorshe si degdeg ah isla caawaba taliyaha dhaawacmay loo qaadayo dhinaca Hargeysa.
Waxana wararku intaas kusii daayaan in uu baxsaday askarigii rasaasta la beegsaday taliyihiisan balse lagu daba jiro soo qabashadiisa.
2 thoughts on “Taliyihii Ciidanka Koofiyad-casta Ceerigaabo oo La dhaawacay”
14/06/2015 at 03:18
Axmed Robble waxad tahay wariye siween wararka uhela una fidiya,waxad kaficantahay kuwo isku shega wariye,tusale shabakada lamaga baxday,Daynile,Mida layirahdo Waga cusub,Keydmedia,dhanatod wa qurun qashin iyo Caydtan Qabyalad ku shaqeya,waxan qiraya in aad tahay wariye madax banaan oo hufan,oo kawanagsan kuwa aan kor ku shegay,wardoon anigu waa racsanahay mahadsanid.
14/06/2015 at 03:24
shabakada wardoon waa shabakada kaliya ee aan markasta aqriyo ugu yaran waxan waxan malinti boqda 5 jeer waxan ka hela warar 80% saxyihin,waxan so jeinaya shabkadaha warfidint in aay sidas yelan oo iska dayan beenta,Qabylada Qashinka Qurunka iyo isku dirka bulshada somalida,axmed rooble marlabad ayaan ku tahniyenaya.